सुशान्त सिंह राजपुत र उनकी पूर्व म्यानेजर दिशाको मृत्युमा भेटियो यस्तो कनेक्सन ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /International/सुशान्त सिंह राजपुत र उनकी पूर्व म्यानेजर दिशाको मृत्युमा भेटियो यस्तो कनेक्सन !
मुम्बइ। बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुत र उनकी पूर्व म्यानेजर दिशा सलियनको जून महिनामा एक हप्ताभित्रमा मृत्यु भयो । सुशान्तको शव १४ जूनमा बान्द्रास्थित फ्ल्याटमा पंखामा भलुण्डिएको भेटिएको थियो । दिशाले मलाडमा एक फ्ल्याटबाट हाम्फालेर आ-त्मह-त्या गरेकी थिइन् । अहिले यी दुईको ह्वाट्सएप च्याटको स्क्रिनसट सार्वजनिक भएको छ जसले यी दुई अप्रिलमा उक अर्कासँग सम्पर्कमा भएको देखाउँछ ।
च्याटमा भएका कुराकानीअनुसार दिशाले त्यतिबेला सुशान्तको पब्लिक रिलेसनको लागि काम गरिरहेकी थियन् र नयाँ प्रोजेक्टका विषयमा उनीहरु लगातार सम्पर्कमा थिए । अप्रिलमा सुशान्तलाई टेलिभिजन विज्ञापनका प्रस्ताव पनि आइरहेका थिए । यसअघि दिशाको परिवार र केही मिडिया रिपोर्टमा दिशा र सुशान्त केवल एक पटक भेटेको दावी गरिएको थियो ।
तर, यो खुलासाले ती दावीको खण्डन गर्छ । सार्वजनिक भएको स्क्रिनसडले दुवै व्यवसायिक विषयमा निरन्तर निकट सहेको खुलासा गर्छ । मृ-त्युअघि दुवै निकै निकट रहेको र एक हप्ताभित्र दुवैले आ -त्म ह- त्या गरेको पृष्ठभूमिमा अहिलेको खुलासाले दुवैको मृ-त्युको कारण एउटै हुन सक्ने समेत संकेत गर्छ ।